युगसम्बाद साप्ताहिक - राप्रपा विभाजनको अठारौं शृङ्खला
Wednesday, 11.13.2019, 12:58am (GMT+5.5) Home Contact
राप्रपा विभाजनको अठारौं शृङ्खला
Tuesday, 08.08.2017, 06:29pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पंचायतका हस्तीहरु पनि प्रजातान्त्रिक धारमा समाहित हुँदै पार्टी खेले– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । त्यही पार्टीको दुईटा संगठन देखियो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नाममा । पंचायतका खम्बा मानिएका दुई नेताले दुई पार्टी गठन गरेर पूर्व पञ्चहरुको विभाजित मानसिकतालाई उजागर गरे । एकता र विभाजनकोा लामो शृङ्लखामा राजतन्त्र र गणतन्त्रको सैद्धान्तिक धारबीच भएको एकता ८ महिनापछि पुनः विभाजित भयो ।
पछिल्लो एकतापछि संसदमा बलियो बनेको राप्रपा संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताको विवादले विभाजित भएको हो । २५ सांसद रहेको राप्रपा नेपाललाई कमजोर तुल्याउँदै पशुपति शमशेर राणाले आइतबार आफ्ना सहित राप्रपा नेपालका समेत सांसद लिएर गएपछि राजनीतिको नयाँ कोर्स सुरु भएको छ ।
शेरबहादुर देउवा सरकारमा जाने कि नजाने, संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले राप्रपा विभाजित भएको हो । पार्टी अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच सरकारमा सहभागी हुने आआफ्नै दाउले राप्रपा विभाजित भएको हो । फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकता महाधिवशेन गरेको राप्रपा विभाजन र एकताको यो १८ औं शृङखला हो ।
कांग्रेस सभापति शरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनको विषयले राप्रपा पुनः विभाजित भएको हो । दुई पार्टी एक भए पनि भित्री रुपमा विभाजनको तुष र नेतृत्वको घमण्ड कायमै रहेका कारण सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादका कारण पार्टी विभाजित भयो । महाधिवेशनबाट ऐतिहासिक रुपमा विजयी भएका अध्यक्ष थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैंले नेतृत्व गर्न खोज्दा राणा समूहले उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिएको र आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि थापाले राणा समूहका सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोकेपछि विवाद चुलिएको थियो । राणा पक्षका सांसदहरुले थापालाई रोकेर मन्त्री बन्न देखेको सपना पूरा नभएपछि पार्टी विभाजन गरेको थापानिकट नेताहरूको दाबी छ ।
खासमा नेता राणाको नातेदार समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई सघाउने विषय नै विभाजनको प्रमुख कारण र यसमा भारतको समेत हात रहेको बताइन्छ । एकताबाट मजबुत भएको राप्रजालाई कमजोर तुल्याउन विदेशी शक्ति र सत्तापक्षको हात रहेको समेत थापा निकट नेताहरुको आरोप छ ।
वरिष्ठ नेता राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)” नामसहित नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ । राणाको अध्यक्षतामा गठन भएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)मा राप्रपाका ६६ केन्द्रीय सदस्य र १९ सांसदको हस्ताक्षर छ । यद्यपि, राणा समूहले २२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ ।
संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिइएको सूचनामा पनि १९ सांसदको मात्र हस्ताक्षर रहेको सचिवालयले जनाएको छ । साँझ ५ बजे राप्रपा संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले १९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता भएको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई दिएको थियो । राणा पक्षमा निर्वा्चित सांसदत्रय दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रमबहादुर पाण्डेको समर्थन छ ।
यस्तै, सांसदहरू आन्नदीदेवी पन्त, इस्तियाक अहमद खान, गीता सिंह, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ नुवाकोट, लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा राणा समूहमा छन् । अध्यक्ष थापानिकट सांसदहरू कमलादेवी शर्मा, धानो महरा, रामकुमार सुब्बा, रेशमबहादुर लामा, लीलादेवी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, विराज विष्ट, शयन्द्र बान्तवा र सीता लुइँटेल ज्ञवालीले पनि पार्टी छाडेका छन् । राणा समूहनिकट भनिएका जयन्त चन्द र परशुराम तामाङले भने नयाँ दल दर्ताको सूचनामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
राप्रपाको विभाजनले संसद्को अंकगणितमा हेरफेर हुनेछ । एकीकृत राप्रपाको ३७ सिट थियो भने विभाजनले राणाको पक्षमा १९ र थापाको पक्षमा १८ हुन पुगेको छ । राणा समूहले भने आफ्नो पक्षमा २२ र थापाका पक्षमा १५ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । एकताअघिको राप्रपा नेपालका २५ र राप्रपाका १२ सांसद मिलेर ३७ सिट पुगेको थियो ।
माओवादी पनि संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा (07.26.2017)
पुनःनिर्माणमा समन्वयको अभाव (07.26.2017)
भोलि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन (06.28.2017)
कुर्सी हत्याउने तालमेलको नतिजा के होला ? (06.28.2017)
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल (06.28.2017)
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)